Ingabe unomfutho ngokwanele weNja Yenkomo yase-Australia? - Izinhlobo
Eyaziwa nangokuthi iBlue Heeler, i-Australia Heeler, iRed Heeler, iHall Heeler, noma iQueensland Heeler, i-Australian Cattle Dog wuhlobo oluyingqayizivele olwaziwa ngengubo yalo enamachashazi.
Ngokusebenza okunamandla nobuntu obulukhuni, lezi zinja ezinhle aziwona umngane ophelele wawo wonke umuntu.
Qhubeka ufunde ukuze uthole okuningi ngalolu hlobo lwenja njengoba sithola umlando wazo, sithola ubuntu babo, futhi sithola ukuthi yini ebenza bakitaze.
Yavelaphi i-Cattle Dog yase-Australia?
Ngabe i-Blue noma i-Red Heeler ibukeka kanjani?
Ingabe inja yezinkomo yase-Australia isilwane esihle somndeni?
Ukunakekela Inja Yenkomo Yase-Australia
Ihlala isikhathi esingakanani Inja Yezinkomo Yase-Australia?
Kubiza malini iBlue Heeler?
I-Blue Heelers iyaxubana
Ubuhle nobubi bokuthola i-Australian Cattle Dog
Izinhlobo ezifanayo neBlue Heelers
Njengoba igama labo liphakamisa, izinja zezinkomo zase-Australia zenziwa e-Australia ngasekupheleni kwekhulu le-19.
Zenziwe ngabahlali futhi Abafuyi bezinja abasebenzisa uhlobo lwezinja ukwalusa izinkomo zabo , kanye neminye imfuyo yomdabu, isebenzisa ukuluma kanye ne-nips.
Lokhu kuncipha ezithende kunikeza lezi zinja elinye igama, iBlue Heeler noma iRed Heeler.
Lezi zinja eziqinile zaba neqhaza elikhulu ekukhuliseni imboni yezinkomo ezweni.
Izinja zokwalusa ekuqaleni ezazilethwe zisuka e-United Kingdom, ezaziwa ngokuthi uhlobo lweSmithfield, azitholakalanga ukumelana nezimo ezinzima zase-Australia, isimo sezulu esibi kakhulu, namabanga amade.
Imvelo yabo esezingeni eliphansi ibinganele nokwelusa izinkomo zasendle zasemaphandleni ase-Australia.
Ngakho-ke, lezi zinja zezimvu ezifuywayo, IBorder Collies , futhi AmaDalmatians zazikhona okhuliswe ngama-dingoes asendle e-Australia ukuthuthukisa inja esebenza kanzima.
Izinhlobonhlobo zeziphambano zazincishisiwe ekuqaleni, kanti i-Highland Collies enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka yaseScotland yabonakala iyintandokazi lapho iweliswa ngama-dingos asendle.
Ukukhubazeka kwanezela ukwethembeka nothando lwamahhashi, kwakha izinja ezinamachashazi. Eminye, okwakungabazalwane bakwaBagust, baphinde bawela namaKelpies amnyama noshukela ukufaka umfutho.
Ukuhlanganiswa kwe-Kelpies yase-Australia kuholele ezinhlotsheni eziluhlaza okwesibhakabhaka, nezinombala obomvu we-Australian Cattle Dog eyenziwe, iBlue Heelers ithandwa kakhulu.
Zakhonjiswa okokuqala ngo-1897 nguRobert Kaleski, naye owakha indinganiso yokuzalanisa ye-Australia Heelers, esebenzisa i-dingo njengesisekelo abasebenza kuso.
Lawa mazinga avunywa ngo-1903 yiKennel Club yaseNew South Wales, negama elithi Australian Heeler kamuva laziwa kakhulu njenge-Australian Cattle Dog.
I-American Kennel Club (i-AKC) yabona lolu hlobo ngo-1980, ekuqaleni ngaphansi kwesigaba esixubile, elalifanele ukukhonjiswa eqenjini elalisebenza ngoSepthemba walowo nyaka.
NgoJanuwari ka-1983, i-Australian Cattle Dog yathunyelwa eqenjini lokwelusa.
Bheka Inja Yezinkomo Zase-Australia ezenzweni zokwalusa kule vidiyo:
Namuhla, iBlue and Red Heelers ibukeka ifana kakhulu nama-dingoes asendle, ngombala webhantshi ngumahluko obonakala kakhulu.
Kunjalo izinja ezihlangene, eziqinile futhi ezizinzile , ngokwakhiwa okufanayo ne-dingo, kepha kukhuluphele kancane futhi kunemisipha eminingi.
Umzimba mude ngaphezulwana kokuphakama, kuyilapho isifuba sijulile futhi amahlombe ebanzi.
Imilenze iqonde ezinyaweni eziyindilinga ngezinzwane ezifushane. Umsila wabo omude ubekwe phansi, ulenga ngejika elincane.
Ezinye izinja ezisebenzayo nazo zizofakwa imisila yazo e-United States, yize lo mkhuba uvinjelwe kwezinye izingxenye eziningi zomhlaba.
Banekhanda elibanzi, eligobekile kancane elinemihlathi eqinile, enamandla, intamo emile okujiyile, ukusineka okusabisayo okunesikisi sokuluma, nezindlebe eziqonde phezulu ezinesisindo esiphakathi nendawo.
Ikhala elimnyama namehlo ansundu ansundu aqedela ukuvela kwawo.
Ziba nkulu kangakanani izinja zezinkomo zase-Australia?
Izinja Zezinkomo Zase-Australia zime nxazonke Amasentimitha angama-17 kuye kwangama-20 (amasentimitha angama-43 kuye kwangama-51) mude lapho ubuna bese ulinganisa phakathi Amakhilogremu angu-30 nangu-50 (14 no-23 kg) .
Abesilisa ngokujwayelekile baphakathi Amasentimitha angu-18 kuye kwangu-20 (46 kuya ku-51 cm) , nabesifazane bebafushane nje kancane Amasentimitha angu-17 kuye kwayi-19 (amasentimitha angama-43 kuye kwangama-48) ukuphakama.
Izinja Zezinkomo Zase-Australia zibhekwa njengezikhulile ngokugcwele ezinyangeni eziyi-18 kuye eminyakeni emibili ubudala.
Yize iyinja enesilinganiso esiphakathi nendawo, lolu hlobo olusebenzayo oluqinile ayikufanelanga kahle ukuhlala efulethini futhi udinga ipulazi, ipulazi, noma okungenani ikhaya elinegceke eliphephile lapho bezulazula khona, bagijime futhi bahlole.
Yize bethanda ukuba ngaphandle, lezi zinja ngidinga ukuhlala ngaphakathi , ikakhulukazi ebusuku, futhi ngeke yenze kahle uma ihlukanisiwe nomndeni wayo isikhathi eside.
Izinja zezinkomo ezincane zase-Australia azaziwa ngokusemthethweni.
Uhlobo oluncane lwalolu hlobo kwesinye isikhathi lwenziwa ngokuxuba lezi zinja nezinhlobo ezincane, njengeShih Tzu noma iDachshund, noma ama-runt wokuzalela ngokungaguquguquki.
Kodwa-ke, lezi zinja zingeza nezinkinga eziningi zezempilo futhi zigwenywa kangcono.
Ijazi leNja yezinkomo yase-Australia
I-Queensland Heelers inayo ijazi elikabili , equkethe ibhantshi elifushane, eliminyene futhi elibushelelezi, ijazi elingaphandle elimelana namanzi . Isendlalelo sangaphandle esivikelayo siqondile, sinezinwele eziphakathi nendawo.
Izinja zezinkomo zase-Australia zingena imibala emibili ehlukahlukene , okungukuthi iBlue Heeler neRed Heeler.
Njengoba amagama asikisela, ukufaka umbala kwale nja kungaba okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okumnyama esimweni seBlue Heeler noma ichashazi elibomvu eline-tan yohlobo lwe-Red Heeler.
Kwesinye isikhathi, ingubo yangaphansi yenja yeBlue Heeler ingashiswa ngejazi eliluhlaza okwesibhakabhaka elinamaki we-tan ekhanda, esifubeni, emhlathini, emphinjeni nasemilenzeni. I-Blue Heelers kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi inombala ohlanganisiwe.
Ngakolunye uhlangothi, iRed Heeler ibomvu yonke indawo, inejazi elibomvu futhi kwesinye isikhathi ukumakwa okubomvu kujule kakhulu ekhanda. Lezi zinja kwesinye isikhathi zibizwa ngokuthi izinja zezinkomo ezi-brindle noma ezinsundu zase-Australia.
Zombili izinja, amabala amancane kanye nokuklanywa okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okubomvu kusatshalaliswa ngokulinganayo phezu kwengubo enkulu emhlophe. Ukumakwa okumnyama okumnyama akufuneki ngezinja zokubonisa.
Kungaba yinselele ukutshela umbala we-Australian Cattle Dogs njengemidlwane ngoba lezi zinja zinjalo wazalwa emhlophe qwa, kungakhathalekile ukuthi yizinhlobonhlobo eziluhlaza okwesibhakabhaka noma ezibomvu.
Lesi yisici esizuzwe njengefa ethonyeni le-Dalmation. Umbala kwesinye isikhathi unganqunywa ngokubheka amaphedi ezinyawo zawo.
Umbala wangempela wenja uzoqala ukukhula lapho i-Australian Cattle Dog yakho ifinyelela cishe emasontweni amane ubudala.
Yize ezinikele kakhulu futhi eqotho emindenini yabo, izinja zezinkomo zase-Australia azenzi ukukhetha okuhle kwezinja emindenini enezingane ezincane.
Lolu hlobo luvame zinamathele kumuntu oyedwa futhi ingaxwaya kakhulu abantu bangaphandle.
Kwesinye isikhathi baziwa njengenja ye-velcro ngenxa yemvelo yabo yokunamathela kumuntu oyedwa ngaso sonke isikhathi futhi bazokuzonda ukuhlukaniswa nalowo muntu nganoma yisiphi ubude besikhathi.
Ngenxa yalokho, abenzi kahle uma beshiywe bodwa isikhathi eside futhi bangaphendukela ekuziphatheni okulimazayo, njengokumba nokuhlafuna.
Baphinde bathande amanzi futhi banomkhuba wokubhukuda, bavame ukungena echibini noma ngabe uyawathanda noma awuthandi.
Zingaba futhi okusolisayo ngezingane ngubani ongabonakala njengosongo ngoba benza ngokuxhamazela futhi bakhombisa isimilo esingalindelekile.
Ngenxa yalokhu, loluhlobo lokufuya lokwelusa nokuziphatha kwe-nping kuvame ukuqondiswa ezinganeni nasezifuyweni ezincane zemindeni.
Njengenja enomlomo, zizokhipha futhi zilume lapho zidlala futhi zingaba namandla kakhulu ezinganeni nakwezinye izilwane.
Okwabo ukushayela okuqinile Kusho nokuthi bazothakaselwa ikakhulukazi amakati, izingwejeje, nonogwaja.
Lokho kusho ukuthi, Izinja Zezinkomo Zase-Australia zingazwana nezinye izinja uma zethulwa kubo njengomdlwane.
Kodwa-ke, bavame ukuba nomona ngomuntu abakhethiwe uma enye inja inganakwa.
Lesi simo sokusebenza, isitayela sokwelusa, nokuzinikela kubanikazi kwenze lolu hlobo lwenja lwathandwa kakhulu ngabalimi. Zisebenza futhi ngokuthula futhi azijwayele ukukhonkotha, kakhulu njengezinja zasendle.
Kodwa-ke, amazinga abo aphezulu wamandla adinga ukunakekelwa ukuvimbela isithukuthezi ukuthi singene ngaphakathi. Futhi, ubuhlakani babo, imvelo yangamabomu badinga ukuqeqeshwa okungaguquguquki ukulawula.
Ingabe Izinja Zezinkomo Zase-Australia zinolaka?
Lokhu kuthembeka komnikazi oqinile kwalolu hlobo kuyazenza izinogada ezivikelayo ; kepha, njengoba kushiwo, ungalindeli ukuthi lolu hlobo luzokhonkotha.
Bona kungaba nolaka nezinye izinja, futhi abantu ongabazi nokuqeqeshwa okuqinile kuzodingeka kusukela ebuntwaneni ukulawula nokuhambisa kahle lokhu kuthambekela.
Uma i-Australian Cattle Dog ivunyelwe ukuba ngumholi wepakethe, khona-ke isimo sabo esinolaka, esinamandla singathatha izintambo, sibangele ukuthi balwe nezinye izinja.
Ngokujabulisayo, lolu hlobo kulula ukuluqeqesha; kodwa-ke, kuzodingeka isitayela esiqinile futhi esiqinile sobunikazi.
Ukuqeqeshwa okuhle kwalezi zinja kungenxa yomlando wazo omude wokusetshenziswa njengezinja ezisebenzayo kuma-ranches.
Njengoba izinja zezinkomo zase-Australia zikhuliswe ngokukhethekile ukumelana nesimo esibi sasemaphandleni ase-Australia namazinga okushisa aphezulu, kunjalo izinja ezibekezelela ngendlela emangalisayo futhi eziqinile .
Kunjalo ilungele noma yisiphi isimo sezulu , ngisho nokushisa okubandayo, ngenxa yengubo yabo evikelayo.
Ngenxa yalokhu, i-Australian Cattle Dog ayisiyo inhlobo enezidingo zokunakekelwa okuphezulu. Imvelo yabo egxile kakhulu ibenza ukuthi baqhubeke nokusebenza ngisho noma besezinhlungwini noma belimele noma begodola kakhulu.
Ngakho-ke udinga ukuthi uqaphele lapho unakekela futhi unakekela lolu hlobo.
Izimpawu inja yakho edonsa kanzima zingabandakanya ukuzamazama, ukuqhaqhazela, ukuhayiza, ukukhononda, nokufaka umsila wazo ngaphansi komzimba nokuphakamisa izidladla zakho phansi.
Ngiyigcina kanjani imatasa Inja yami Yezinkomo yase-Australia?
Lokhu kuzala kwamandla amakhulu kuyachuma lapho unikezwa umsebenzi futhi uzodinga ukudlala okuningi nokuzivocavoca umzimba ukuze uhlale ujatshuliswa.
Ngaphandle kwemisebenzi esobala yokwalusa, lezi zinja ziyathanda futhi ukugijima nokwenza imisebenzi lapho zisebenza khona nomnikazi wazo ezithanda kakhulu, njengokugijima, imidlalo yezinja, ukulalela, i-rally, i-frisbee, ne-flyball.
Benza abangane abakhulu kubagijimi abafanele nabagibeli bezintaba futhi sidinga ukuhamba okude noma ukugijima nsuku zonke. Banekhono lokuhamba amabanga amade bengakhathali.
Uma uphume emizileni, qiniseka ukuthi ungalokothi uvumele i-Heeler yakho ihambe phambi kwakho. Ngokucindezela inja yakho ukuhamba eduze noma ngemuva kwakho, uzoqinisa ukuthi uyi-alpha ephaketheni.
Uma kunikezwa ukuzivocavoca umzimba okwanele nsuku zonke noma okungenani ihora elilodwa kuya kwamabili nsuku zonke, lolu hlobo luzokwaneliseka ngokulala embhedeni wabo noma ekhreyithini futhi ngeke lubonise ukuthambekela kokungasebenzi kahle.
Yize izindlebe zabo ezihlinziwe zizohlala njalo ziqaphele noma yini engajwayelekile eyenzekayo.
Ngabe kufanele ngondle kangakanani ukudla kwezinja zami zase-Australia?
Ngenxa yamandla abo aphezulu namandla asebenzayo, ama-Heelers ase-Australia adinga ukudla kwenja okugcwele izakhamzimba namavithamini ukwengeza imisipha nezingqondo zabo.
Bheka ukudla kwenja lapho isithako esiyinhloko kungamaprotheni , njengenyama yenkomo, inkukhu nenhlanzi. Izinhlamvu nemifino kufanele kubhalwe njengezithako ezilandelayo ekudleni okukhethayo.
I-dry kibble izosiza ukuhlanza ukudla nezinsini zabo, kepha ungathola ukuthi njengoba inja yakho ikhula, ama-kibbles abo adinga ukumanziswa noma adinga ukushintshela ekudleni okusemathinini, okulula ohlelweni lokugaya ukudla.
TO Kunconywe inani lezinkomishi eziyi-1.5 kuya kwezi-2.5 Ukudla kwenja kufanele kunikezwe inja yakho usuku ngalunye, kwehlukaniswe phakathi kokudla okubili.
Lolu hlobo lungabuye luzuze kwizithasiselo ezifana ne- i-glucosamine , ekhuthaza amalunga omzimba aphilile.
Ngabe iBlue Heelers iyachitha?
Yize i-Australian Cattle Dog akuyona into yokuchitha ngokweqile , bavame ukushaya ijazi labo kanye noma kabili ngonyaka ngokushintsha kwezinkathi zonyaka. Ngalesi sikhathi, bazokhipha izinwele zabo ngama-clumps.
Ngenkathi ijazi ngokuvamile lingadingi ukunakekelwa okuningi, ukuxubha ngebhulashi eliqinile kanye ngesonto izogcina inja yakho ihlanzekile futhi ingenakho ukungcola.
Ungahle udinge ukubhulasha kaningi ngezikhathi zokuchitheka okunzima ukususa lezo zinwele ezifile ngokweqile. Uhlobo olujwayelekile oluhlanzekile futhi oluhlelekile, i-Australian Cattle Dog nayo ayikhiphi amathe.
Ukugeza kudingeka kuphela lapho kunesidingo, kepha amazinyo kufanele abhululwe okungenani kabili ngesonto ukuvimbela ukwakheka kwe-tartar.
Futhi, zama futhi unqume izinzipho zenja yakho njalo ngenyanga uma zingazigqoki ngokwemvelo, futhi uhlole izindlebe masonto onke ukuthi akukho yini ukunuka noma ububomvu, okungaba uphawu lokutheleleka.
Isikhathi sokuphila sezinja zezinkomo zase-Australia ngu phakathi kweminyaka engu-12 no-16 . IBlue Heeler njengamanje iphethe isihloko se- inja endala kuGuinness Book of World Records . UBluey waphila iminyaka engu-29.5 emangalisayo.
Lapho uthola i-Australian Heeler puppy, kufanele ulindele ukubona imvume ye-hip ne-elbow dysplasia, isifo se-von Willebrand, ne-hypothyroidism evela ku-Orthopedic Foundation for Animals (OFA).
Imvume yezempilo eqinisekisa iso lenja ingokwejwayelekile ingalindelwa, njengoba kunjalo nokuhlolwa kwe-thrombopathia evela e-Auburn University. Lezi zitifiketi zingahlolwa ngaphambi kokuthenga umdlwane ku Iwebhusayithi ye-OFA .
Njengezinja ezinamandla, ezemidlalo, i-Australia Heelers ingaphansi kwabaningi izifo ezithinta amalunga nemisipha .
Kanye ne-hip dysplasia, engaholela ebuhlungwini nasekukhubazekeni, inkinga eyodwa ejwayelekile yezempilo engathinta i-Australian Cattle Dog yakho yi-Progressive Retinal Atrophy (PRA). Lesi sifo samehlo senza i-retina yehle.
Ukungezwa nakho kuvamile kulolu hlobo; kodwa-ke, lokhu kungavivinywa lapho inja yakho ingumdlwane, futhi izinja zabazali abayizithulu akufanele neze zizalwe.
Inja ye-Cattle Dog yase-Australia engaxutshwe nalutho ingakwazi kubiza noma yini kusuka ku- $ 250 kuya ku- $ 1,100 , ngokuya ngohlu lozalo lomzali, umfuyi, indawo, njll.
Osayizi be-Litter ngokuvamile bahlanganisa imidlwane eyodwa kuya kwemibili, ngesilinganiso semidlwane emihlanu.
Ngaphezu kwezindleko zokuthenga i-Blue noma i-Red Heeler, kufanele futhi ubeke isabelomali ezindlekweni zokwelashwa zaminyaka yonke, njengemithi, ukuvakashelwa kwezilwane, nokubulala izikelemu, okungabalelwa ku- $ 600 kuye ku- $ 800 unyaka ngamunye.
Abazalisi bezinja zezinkomo base-Australia
Ngenkathi lezi zinja zivame ukukhuliswa njengezinja zase-ranch, ungathola ukuthi zihamba ngenani elifanele kusuka kubalimi abangabhalisiwe.
Kodwa-ke, hlala wenza umsebenzi wakho wesikole ukuhlola izimo zokuzalela, impilo yabazali, nomlando wezokwelapha ngaphambi kokuthenga umdlwane wase-Australia wezinkomo.
I-Australian Cattle Dog Club of America inekhodi yokuziphatha yabazalisi kanye nohlu lwabazalisi abahloniphekile iwebhusayithi yabo .
Naba bazalisi bezinja zezinkomo base-Australia ukuze uqalise kusesho lwakho lomdlwane ophelele:
I-Sugar N Spice Izinja Zenkomo Zase-Australia , IGoodyear, e-Arizona
I-Iron Clad ACDs , Waddell, e-Arizona
I-Adams Ranch ACDs , EPhelan, eCalifornia
Ukuhlengwa Kwenja Yezinkomo zase-Australia / ukwamukelwa
Izinja zezinkomo zase-Australia kwesinye isikhathi zithengwa ngabanikazi abangabazi ubuntu obuqinile futhi balwa nokuba neyodwa. Ngakho-ke kwesinye isikhathi ungathola eyodwa itholakale endaweni yokutakula noma yokukhosela.
Kunamaqembu amaningana okusindiswa kwezinkomo e-Australia lapho ungasesha khona inja efuna ikhaya elinothando.
I-Australian Cattle Dog Rescue Inc. ingenye yaleyo nhlangano enikeza izixhumanisi zezinhlangano zokusindisa nokuthunyelwe izinja ezitholakalayo ikhasi labo le-Facebook .
Ungazama futhi ukufuna iBlue Heeler ukuze yamukelwe kulawa masayithi:
Ukutakulwa Kwezinja ZaseTexas , ETexas
Ithimba Lase-Ohio Cattle Dog Rescue , E-Ohio
Ukusindiswa nokubuyiselwa kweCarolina ACD , UCarolina
Amanye amamiksi wezinja zezinkomo ase-Australia asemfashinini namuhla.
Ukuwela iBlue Heeler noma iRed Heeler ngolunye uhlobo kungaholela enjeni enombala oyingqayizivele, omuhle walolu hlobo kepha nolunye uhlobo lwesimo senja, okubenza babe abangane abangcono.
Ezinye zezingxube zeBlue Heeler ezaziwa kakhulu zihlanganisa iCorgi Heeler, iBeagle Heeler, iBox Heeler, neBlue Cocker Spaniel. Ake sibhekisise ezinye izinhlanganisela ezivamile ze-Australian Cattle Dog:
Umxube wePit Bull Blue Heeler
Hlangana noKroki, i-Pit Heeler (i-Pit Bull Blue Heeler mix) - Umthombo wesithombe
IPit Heeler isigamu seBlue Heeler nengxenye ye-American Pit Bull Terrier.
Lolu hlobo lwemisipha nolomeleleyo lukhula luze luzungeze Amasentimitha angama-24 (61 cm) ukuphakama futhi inokubukeka okusabisayo okubenza babe ababukeli bezinono.
Njengohlobo olunamandla, iPit Heeler idinga ukuzivocavoca umzimba nokuqeqeshwa okuningi. Futhi bayizinja ezinikele ngokweqile ezifuna ukunakwa kumuntu wazo.
Ukuhlanganiswa kweSiberia Husky Blue Heeler
Hlangana neBhele, i-Ausky (ingxube yaseSiberia Husky Blue Heeler) - Umthombo wesithombe
Yeqa i-Australian Cattle Dog nge-Husky yaseSiberia, futhi uzothola uhlobo olusebenzayo nge-drive eqinile yezilwane.
Eyaziwa nangokuthi i-Ausky, le nja ijwayele ukujaha izingane nezilwane ezincane futhi idinga ukuqeqeshwa okuningi nokuhlangana nabantu ukuze izilawule.
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Blue Heeler
Hlangana noLiesel, inhlanganisela yaseGerman Shepherd Blue Heeler - Umthombo wesithombe
Uhlobo olunamandla, ingxube yaseJalimane i-Shepherd Australian Cattle Dog, ingakhula iye nxazonke Amasentimitha angama-25 (amasentimitha angama-64) ubude nesisindo phakathi Amakhilogremu angu-30 no-95 (14 no-43 kg) .
Njengohlobo oluphezulu olunemvelo evikelayo, zenzela izinja eziqaphile kakhulu kepha azibalungele kahle abanikazi bezilwane ezisencane.
Lolu hlobo luthambekele ekuchithekeni ngokweqile ngezidingo ezinamandla zokuzilungisa, ngenxa yejazi lazo elikabili.
Ngenkathi zibukeka zizinhle, izinja zezinkomo zase-Australia zinjalo ayifanele kahle abanikazi bezilwane bokuqala nanoma ngubani ohlala efulethini.
Lolu hlobo ludinga ukuvuselelwa okuningi ngokomzimba nangokwengqondo futhi lungabonisa isimilo esinolaka noma esilimazayo ngaphandle kokuqeqeshwa nokunakwa okufanele.
Lokho kusho ukuthi, abanikazi bamapulazi noma abantu abasebenzayo bazokuthanda ukwethembeka kwalolu hlobo oluyingqayizivele, imvelo yokuvikela namandla asebenzayo.
Izinhlobo eziningana ezifanayo zingatholakala ezifana ne-Australian Cattle Dog ngokubukeka futhi zinezici zobuntu ezifanayo.
Bheka lezi zinhlobo ukuthola ukufana nomehluko phakathi kwalezi zinja neBlue Heeler:
I-Pitbull Dachshund Mix: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
ama-pit bulls ahlanganiswe nelebhu
ukuhlanganiswa okuncane kwe-poodle german shepherd
labrador blue heeler mix imidlwane
amagama empisi emnyama
umehluko phakathi kwe-retriever yegolide ne-labrador